संघीयताले गाउँ जा भन्छ, त्यसैले गाउँमै बस्छु: नेता, विश्वप्रकाश शर्मा(भिडियो)
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा पृथक र शसक्त विचारका कारण चर्चित छन् । विशेष गरी राजधानी भन्दा पनि जिल्लामै बसेर राजनीति गर्न रुचाउने उनी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि आफ्नै गृहजिल्ला झापामा नै विभिन्न कामहरुमा सक्रिय छन् ।
बरु गणतन्त्रमाथि तीनदलको खतरा छ : सांसद कुमार खड्का
राजनीतिक नेतृत्वहरुको मानसिक दिवालीयापनको घोतक हो, यो सोच । त्यत्रो त्याग , जनताको बलिदानबाट प्राप्त यो उपलब्धी व्यक्तिको विज्ञप्ती र अभिव्यक्तिका कारण खोसिन्छ भन्नु क्रान्तिको अपमानको रुपमा मैले बुझेको छु । के हामीले प्राप्त गरेको यत्रो युगान्तकारी परिवर्तनको जग यति कमजोर छ ? लोकतान्त्रि गणतन्त्रलाई प्रमुख तीन दलले कमजोर पारिरहेका छन् । बरु गणतन्त्रमाथि तीनदलको खतरा छ!
पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मान्नु धेरै बैज्ञानिक हुनेछ : मण्डल
दलहरुले नेपाल सोच्नु पर्यो । अहिले भारको हस्तक्षेप खुलेयाम देखिएको छ । नेपाल भारतबीचको रोटी बेटीको सम्बन्ध सनातनी हो । खुला सीमा छ केही सांस्कृति परम्पराहरु निरन्तर छन र हुने पनि छन् । यसको अर्थ नेपाल भारतको कुनै भाग जस्तो हुन सक्दैन ।
दाहालले देश टुक्रयाउन सुरु गरे : चित्रबहादुर केसी
संघीयता यो देशका लागि आवश्यक नै होइन । जनताका लागि आवश्यक नै होइन । यति सानो देशका लागि के को संघीयता ? जनतालाई घरघरमा सेवा दिन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अँगाल्नु जरुरी छ । यदि संघीयता लागू भयो भने देश विखण्डनमा जान्छ । ठुला भनेका दलहरुले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनु जरुरी छ ।
भारतले बुझ्नु पर्छ, नेपाल भुटानजस्तो बन्न सक्दैन : हिरण्यलाल श्रेष्ठ
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आलंकारिक भए पनि नेपाल बारे जानकारी राख्ने व्यक्ति हुन । उनी भारतको परराष्ट्रमन्त्री , अर्थ र रक्षामन्त्री समेत भएका राजनीतिज्ञ हुन । नेपालका अनेक मामलामा उनले प्रत्यक्ष डिल गरेका छन् । उनले नेपालका अधिकाँश नेताहरुलाई राम्रोसंग जान्दछन् । नेपाली नेताहरुले पनि उनलाई राम्रैसंगै चिन्दछन् ।
राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँआधार सिर्जना हुुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं, कात्तिक १६ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट बुधबारदेखि हुन लागेको नेपालको राजकीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आधार सिर्जना गर्ने विश्वास परराष्ट्रमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टीले कारवाही गर्छ भने भोग्न तयार छौँ : सांसद शाही
हामी जनताका लागि काम गर्दै छौँ , लोकमानले सर्वोच्च अदालत , व्यवस्थापिका सांसद देखि मुलुकका विभिन्न निकायहरुको अपमान गरेका छन् । गणतन्त्रमा यस्तो व्यावहार सैह्य हुदैन । हामीले लोकमानको स्वच्छचारिताको अन्त्य खोजेका हौ । यस्तो काम गर्दा कारवाहीमा परिन्छ भने हामी कारवाही भोग्न तयार छौँ ।
त्यो माला मेरो गलामा दश सेकेण्ड पनि रहेन : मन्त्री थापा
कसैले खिचेको तस्वीर हेरेर मेरो सामाजिक संजालमा आलोचना भईरहेको छ । यो बुझाईमा गलत भएको मैले बुझेको छु ।